Mwute na Pet Loss: Nduzi Zuru Oke - Nkịta Ajụjụ
Mwute na Pet Loss: Nduzi Zuru Oke
Iru uju na iru uju, tinyere ọnwụ, bụ akụkụ a na-apụghị izere ezere nke inwe anụmanụ.
Iru uju bu ugwo nke mmadu gha egosiputa ihunanya: o bu oke nkpagbu nke obi nke ida, ọdachi, ihe ojo dakwasiri ya; a miri emi nke mwute; mgbu. Mwute na-eduga na iru uju nke bụ ngosipụta nke iru uju (omume nke ịrụ ọrụ site na mgbu).
Iru újú na iru uju, tinyere ọnwụ, bụ akụkụ a na-apụghị izere ezere nke Inwe anu ulo .
Emebiri njikọ mmadụ na anụmanụ n'ọtụtụ ụzọ. Anu ulo na-ebute oke oria ma o bu nke na adighi ike, ndi nwere ihe mberede, ma obu na-anwu agadi. Anu ulo anwuola ma obu zuru ohi, nyefee ya maka nkuchi, ma obu mejuputa ya n'ihi nsogbu akparamagwa. N’agbanyeghị ihe bụ ọnọdụ, nkekọ nkewa na-akpata mmetụta nke mfu.
Anyi na efunwu ahihia bu ihe ndi mmadu na echefu. N'ihi ya, obi na-adịkarị mmadụ iru uju, ọ naghịkwa ekwe ya megharịa ahụ́. N’omenala Ọdịda Anyanwụ ,wa, ọ dịghị ụzọ ọ bụla ọha na eze kwadoro iji mee iru uju maka anụmanụ ndị ibe. Nke a bụ n'ihi na nkwenye na anụ ụlọ na-echezọ nke ọma ma dochie ya. Ọnwụ bụ ihe na-akpasasị uche n'ụzọ mmetụta uche dịka ọ merụrụ ahụ nke ukwuu.
Usoro iru újú bụ usoro ọgwụgwọ dị mkpa iji gbakee site na ọnwụ. Iru uju bụ ụzọ nkịtị e si anagide ọnwụ. Iru uju na-ewe oge, ọ 'agwụbeghị' n'ime ụbọchị ma ọ bụ izu. Mgbe emere ka iru uju nwee ike ikwu okwu, oge ọgwụgwọ na-ebelata; mgbe amachiri iru uju, ngosipụta ya na-adịru ogologo oge.
Otutu ndi mmadu maara ihe iru uju nke ndi mmadu Elisabeth Kübler-Ross . O choputara uzo ise nke iru uju nke ndi mmadu na-anwu ma kpoo ha ndi ozo (obi amamikpe), iwe, ahia ahia, nkụda mmụọ, na nnabata.
Dị ọzọ a maara nke ọma nke iru uju bụ ọrụ anọ nke iru uju nke Worden:
Nabata eziokwu nke ọnwụ ahụ
Nwee ihe mgbu nke iru uju
Gbanwee gburugburu ebe onye nwụrụ anwụ na-efu
Dọrọ ike mmetụta uche ma tinye ya na mmekọrịta ọzọ
Principleskpụrụ ndụmọdụ ndị ga-ekwe ka ọrụ anọ ndị a dị n'elu dị ka ndị a:
Nyere onye lanarịrịnụ aka igosipụta mfu ahụ
Nyere ndị lanarịrị aka ka ha mata ma kwupụta mmetụta ha
Nyere onye lanarịrị aka ka ọ dịrị ndụ na-enweghị onye nwụrụ anwụ
Na-enyere onye ọ bụla nwụrụ anwụ aka n'ụzọ mmetụta uche
Wepụta oge iji ruo uju
Pretkọwa omume 'nkịtị'
Nye ohere maka iche iche
Nye nkwado na-aga n'ihu
Nyochaa ihe nchebe na ụzọ isi nagide
Chọpụta ọrịa na, ọ bụrụ na ọ dị, na-ezo aka na ọkachamara ahụike ọgụgụ isi
Ahụike ahụike na-agbanwe agbanwe ma na-aga n'ihu. Ntuziaka ya sitere na ịjụ na mwute na nwughari. Iru újú na-adịghị arụ ọrụ na-agụnye ịkwụsị iru újú ma ọ bụ ikwubiga okwu ókè banyere àgwà nke ụzọ atọ mbụ nke iru újú. Njirimara ndị a na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe, na-adịgide oge. Symptomatology nwere ike ịgụnye agọnahụ na izere eziokwu, iwe na-adịghị ala ala na ikpe ọmụma, ịda mbà n'obi na-enweghị ike ịnagide ọrụ dị mkpa nke ibi ndụ.
Ike na oge nke ọkwa dị iche iche na-adabere n'ọtụtụ ihe dịka afọ, omume, na ọnọdụ ndụ nke onye nwe ya na nkekọ (echefula njikọ pụrụ iche gbara ụmụ anụmanụ na-enyere aka aka).
Akwụkwọ a dị na Amazon enyerela ọtụtụ ndị aka. Ihe omuma ebe a.
Ndi mmadu bu ndi na-azu azu. Ndị mmadụ na-etolite mgbakwunye mmetụta uche siri ike na anụ ụlọ ha yana mgbakwunye ndị a mgbe ụfọdụ pụrụ iche ma dị iche na nke ha na ndị mmadụ. Mụ anụmanụ na-eje ozi dị ka isi iyi nke ịhụnanya na nkwado na-enweghị atụ (ihe na-agaghị ekwe omume inweta site na mmadụ ọzọ maka iche echiche na-abanye n'ụzọ ọ bụla), nkasi obi, nchekwa, nchekwa, ọchị na ọchị, na nkwụsi ike. Anu ulo nwere udi ndi mmadu na agwa ha di iche iche ma buru ndi enyi na ndi ezinulo.
Dị ka a kọrọ na Akwụkwọ akụkọ nke American Medical Veterinary Medical Association , ndị ahịa na-atụle nghọta na nkwanye ugwu ha na-enweta site n'aka ndị dọkịta ha gbasara mmetụta ha banyere anụ ụlọ ha dịka ihe dị mkpa karịa ọgwụgwọ ahụike enyere.
Statisticsfọdụ ọnụ ọgụgụ na-eju anya: 76% nke anụmanụ niile na-euthanized; ihe karịrị 75% nke ndị nwe anụ ụlọ na-enweta nsogbu na ndagide nke ndụ ha mgbe anụ ụlọ nwụrụ; 40-50% nke ndị ahịa na-agbanwe ndị na-agwọ anụmanụ na-eme nke a n'ihi enweghị afọ ojuju na ọnọdụ ndị metụtara ọnwụ ma ọ bụ euthanasias nke anụ ụlọ ha; 15% nke ndị nwebu anụ ụlọ na-ekwu na ha agaghị enweta anụ ụlọ ọzọ n'ihi na 'ọnwụ nke anụ ụlọ ahụ siri ike nke uche.'
Ndị ọkachamara n'ọrịa anụmanụ na-atụfu ọnwụ kwa ụbọchị ka ha na-achọpụta, na-emeso ma na-euthanize anụmanụ ibe. Mara otu esi etinye aka na nsogbu, kwado mkpebi, ịkwadebe maka euthanasias, na ịhazi usoro iru uju nwere ike inye aka ịgbanwe ahụmịhe na-adịghị mma ka ọ bụrụ nke bara uru maka ndị nwe anụ ụlọ na ndị ọkachamara anụmanụ.
Ndụmọdụ gbasara anụ ụlọ gụnyere ihe karịrị ndụmọdụ iru uju. N'ezie, a na-eme ndụmọdụ ndụmọdụ gbasara anụ ụlọ tupu, n'oge, na mgbe ọnwụ nke ụmụ anụmanụ na-anwụ.
Ọ na-elekwasị anya karịa usoro mmadụ nwụnahụrụ ya. Ndụmọdụ ịkụfu anụ ụlọ nwere ihe anọ dị mkpa:
Ọnwụ na euthanasia nkwadebe
Nkwado iru uju na agụmakwụkwọ
Okwu a bu “ndumodu” na-ezo aka n’inyere ndi mmadu aka site na iru uju nke adighi mgbagwoju anya n’ime oge kwesiri ekwesi. Fọdụ kwenyere na iru uju kwesịrị ekwesị agaghị emetụta ya, agbanyeghị, n'ihe gbasara ifu anụ ụlọ, ọtụtụ mmadụ chọrọ 'ikike' n'aka ndị ha tụkwasịrị obi ọbụna na-ekweta na ha nwere mmetụta nke iru uju.
Isi okwu dị na ndụmọdụ ịla n'iyi bụ nhọrọ. Ndị dọkịta na-ahụ maka anụmanụ ga-enye ndị ahịa nhọrọ maka ịbịaru na euthanasias na ịlele ahụ nke anụ ụlọ ha ma ọ bụrụ na ndị ahịa abịabeghị n'oge ọnwụ. Ha na-enyekwa nhọrọ banyere necropsy na nhazi nke ahụ.
Nhọrọ ndị a tụrụ aro banyere ịgwa anụ ụlọ ka ha nọrọ nke ọma nwere ike ịba uru karịsịa nye ndị nwe anụ ụlọ mgbe ndị dọkịta na-elekọta anụmanụ nyere ha. Nkwanye sitere n'aka ndị ọkacha mara anụmanụ na-enye ndị nwe anụ ụlọ ka ha gaa nke ọma ma mee ka ha mata na a kwenyere na iru uju ha. Mgbe ndị ahịa chere na enyere ha nhọrọ maka itinye aka na ọnwụ anụ ụlọ ha, ha nwere ike iche na ha emeela mkpebi ndị kwesịrị ha.
Ihe ndị a na-atụnye ụtụ na mgbakwunye siri ike. Ndị mmadụ na anụmanụ ndị a nwere ike ịnwe oge siri ike karị mgbe anụ ụlọ nwụrụ.
Anu ulo anu ndi anaputara nye onwu ma obu onwu-onwu
Anu ulo nke nwetara ndi nwe ya na “oge siri ike” na ndu
Anu ulo ndi buru nwata
Anu ulo nke bu ihe ndi ozo nyere ha aka
Anu ulo anu ulo nke anthropomorphized ka adighi nma
Anu ulo anu ulo nke bu ihe nlere anya nke ndi ozo di nkpa (umuaka ndi nwuru anwu), mmekorita (alum di na nwunye gara aga), ma obu oge n’ime ndu ndi nwe ha (otu afo ejiri njem).
Enyemaka ụmụ anụmanụ
Anu ulo anu ulo nke nwere mmekorita di uku na ndi nwe ha site na otutu ọzụzụ (maka nrubeisi , ịchụ nta, wdg).
Nkịtị Ngosipụta nke Iru újú
Ahụ: ịkwa ákwá, ịkwa ákwá, ịsụ ude, ahụ mgbu, ike ọgwụgwụ, mgbanwe n'omume ihi ụra, mmetụta nke ọnụ ọgụgụ, mmetụta nke ujo.
Ọgụgụ isi: ekweghị ekwe, agugo, erughị ala, mgbagwoju anya, enweghi ike itinye uche, visual / auditory / olfactory hallucinations, preoccupation with loss.
Uche: mwute, iwe, ịda mba, ikpe ọmụma, owu ọmụma, mmetụta nke enweghị enyemaka, ọchịchọ ịta ụta, mmetụta nke nnwere onwe.
Elekọta mmadụ: iwepụ, nrụgide, mgbakasị, nchekasị, nhapụ, mmetụta nke ịnọ iche, ọchịchọ ịkwaga ma ọ bụ ịkwaga ebe ọzọ.
Ime Mmụọ: ahia na Chineke, nkwenye okpukpe ma ọ bụ nkwenye okpukpe siri ike, ọhụụ, nrọ ndị bara uru, ahụmịhe paranormal.
Nzaghachi iru uju di mgbagwoju anya
Ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a nwere ike ime ka ndị na-azụ ụmụ anụmanụ nwee mwute.
Ọnwụ ndị ọzọ na-adịbeghị anya ma ọ bụ ọtụtụ na ndụ ha
Ahụbeghị ahụmahụ ọ bụla na ọnwụ
Obere ma ọ bụ enweghị nkwado sitere na ndị ọzọ
Omenala adịghị mma na-anagide nsogbu
Ibu maka ọnwụ
Oge anwụghị anwụ
Ọnwụ mberede ma ọ bụ ọnwụ nwayọ mgbe ogologo ọrịa gasịrị
Anaghị anọ n’ọnwụ ma ọ bụ euthanasia
Na-agba akaebe banyere ọnwụ na-egbu mgbu ma ọ bụ na-akpata ọnya
Ọnwụ nke anụ ụlọ e ji kpọrọ ihe nke ukwuu pụrụ iwute ụmụaka karịsịa.
Childrenmụaka Na-eru Uju
Ihe ịrịba ama nke iru uju na ụmụaka gụnyere (mana ọnweghị oke):
Ahụ mgbaàmà (afọ mgbu, isi ọwụwa)
Gbanyụọ na arụmọrụ nke ụlọ akwụkwọ
Enweghị ike iso ndị ọzọ na-emekọ ihe
Emefu oge gabiga ókè naanị gị ma ọ bụ ịjụ ịnọ naanị
“Ihe mberede” mgbe nile
Àgwà nke ịchọkarị izu okè
Reatlaghachi na ụwa efu
Ihe riri ahụ
Childrenmụaka na-eru uju chọrọ ọtụtụ ihe. Ndị a gụnyere ịhụnanya na-enweghị atụ (n'agbanyeghị ụdị omume ha), mmesi obi ike mgbe niile na ndị ọzọ na-elekọta, mmesi obi ike na ha bara uru, ịkọwapụta oge niile maka ihe merenụ (eziokwu ahụ, ọ bụghị akụkọ ifo iji chebe 'ụmụaka), onye na-ege ntị nke na-anụ' nke ' ihe nwatakiri na-ekwu, nyere aka igosipụta ma ọ bụ kwupụta iru uju na ụjọ, itinye ya (na mkpebi, na olili ozu), ịmakụ na ijide ya, yana enyemaka ọ bụla enyere ndị okenye na-eru uju maka ha nwere ike inyere ụmụaka aka Ọzọkwa.
Myirịta na ọdịiche dị n'etiti nfu nke mmadụ na ọnwụ nke anụ ụlọ
A na ajukwa m ihe myirita na onodu di iche, ma o buru na odi, di n’etiti ndi mmadu nwuru anwu na nwuru anwu maka anu ulo furu efu. Enweela m mpempe akwụkwọ na-achịkọta ihe m chere bụ isi ihe dị mkpa.
Iru uju na-eme mgbe enwere njikọ nke ịhụnanya - nke na-enye ọ pleasureụ kachasị ma na-eme ka ndụ anyị ka ukwuu, ọ ga-abụkwa na ọnwụ ya kpatara ihe mgbu na iru uju. Ihe ole na ole na-agbakwunye na ndụ anyị karịa ịhụnanya na ntinye nke anụ ụlọ kwesịrị ntụkwasị obi. Ha enweghị ebumnuche zoro ezo, ha anaghị ekpe ikpe, ha na-ahụ n'anya n'enweghị ihe ọ bụla.
Otu uju nke iru uju na-emetụta: ịgọnahụ na ikewapụ onwe ya, iwe na ikpe ọmụma, ịzụ ahịa, ịda mba, na nnabata.
Ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na ọnwụ nke anụmanụ anụmanụ ga-ahapụrịrị oge iji gwọọ ma tinye ọghọm ahụ na ndụ ha - ọ dịghị mgbe mmadụ 'ga-eweghara' ọnwụ nke onye ọ hụrụ n'anya. A ghaghị ịgba ndị mmadụ ume ịnakwere iru uju ha dịka ihe kwesịrị ekwesị ma dị mma.
Whoeyi compani didi aɖee nye esia si nye “xexeame” ase akpa aɖee nye esia. Ọ dị mkpa na a ga-agba onye nwe anụmanụ ahụ nwụnahụrụ ume ka ọ rụọ omenala ndị dị mkpa nke “ịhapụ”.
Na mberede, ọnwụ a na-akọwaghị bụ ihe kacha njọ ịnakwere karịsịa ma ọ bụrụ na anụmanụ ahụ bụ nwata ma ọ bụ etiti.
Ọnwụ nke anụmanụ nke nwere ike ịbụ njikọ ikpeazụ na ihe ọzọ dị mkpa ọzọ nwụrụ anwụ ma ọ bụ hapụrụ ma ọnwụ ma ọ bụ ọpụpụ gara aga na-eru uju ọzọ, oge ụfọdụ ọbụna karịa miri emi.
Mmetụta mwute na-egbu mgbu ga-abịaghachi mgbe oge iru uju mbụ gafere (dịka ọmụmaatụ, ụbọchị ọmụmụ, ezumike, ụbọchị ncheta, ịga ebe ọkacha mmasị ma ọ bụ ihu ọnọdụ ụfọdụ).
N'adịghị ka mpaghara ndị ọzọ ọnwụ na ọnwụ na-eme, iru uju na ihe mgbu a na-enwe na ọnwụ nke anụ ụlọ a hụrụ n'anya amachaghị nke ọma, ọ bụ naanị nduzi na nkasi obi pere mpe ka enwere. Ndi mmadu anabataghi iru uju nke umu anu ulo. Ihe ndi mmadu na-aza bu “Kwụsị ịkwa ákwá ma gaa nweta anụmanụ ọzọ iji dochie anya ya” ma ọ bụ “Ọ bụ naanị nkịta (pusi).” Okwu ndị a ekwesịghị ekwesị. Ga-aga lụrụ di ma ọ bụ nwunye ọzọ? Kedu ihe ị ga - eji gwa mmadụ ka ọ pụọ ma nweta anụmanụ ọzọ? Gaghị enwe ike “dochie” otu anụmanụ na anụmanụ ọzọ - ha dị iche na iche iche dịka anyị bụ mmadụ. Nkwupụta okwu ndị dị ka nke a na-eme ka onye ahụ na-eru újú nwee obi amamikpe na onye nzuzu maka inwe mwute na iwe. Nanị nke a na-agbakwunye na nsogbu ahụ. Immụ anụmanụ abụghị 'ya' - ha na - ebi ndụ, na - eku ume, anụmanụ na - enwe mmetụta dịka anyị bụ mmadụ.
Anyị bụ ụmụ mmadụ nwere ike ịhọrọ iji aka anyị na-arụ ọrụ nke ọma. Ndi mmadu nabatara nke a. Nke a na - akpata ọgba aghara mmetụta uche dị ukwuu - ikpe ọmụma, ajụjụ, igwu egwu Chineke, ichere ihe ịrịba ama, na iru uju echere.
Ọ na-esiri ndị mmadụ ike ikweta n’eziokwu na ụmụ anụmanụ anyị dị ezigbo mkpa maka ọdịmma anụ ahụ na nke uche anyị. Ọjụjụ a na-akpata ọgba aghara nke uche na ọgba aghara.
Ọ na-esiri ọtụtụ ndị ike iche ebe anụmanụ ha ga-aga ma ha nwụọ - ọtụtụ n'ime anyị kwenyere na ndị anyị hụrụ n'anya nwere eluigwe, mana ebe anụmanụ ndị ahụ na-aga? Ọtụtụ mmadụ na-ekwu na ha chọrọ udo nke obi n’ịmara na ha ga-ahụ anụmanụ ha ọzọ n’eluigwe. (Ana m echetara ha na banyere Bible, na Chineke chụpụrụ ụmụ mmadụ na paradaịs.)
Iru újú na ihe mgbu a na-enwe na ọnwụ nke anụ ụlọ a hụrụ n'anya abụbeghị obere nghọta.
Ederede ndị a sitere na nchịkọta akụkọ nke Bill Hall dere nke Lewiston Tribune na-egosipụta Nke 3 n'elu:
Mgbe ị kwụsịrị iche echiche banyere ya, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na mmadụ nwere mmekọrịta miri emi miri emi dị otú a na nkịta na nwamba. Anyị enweghị ọtụtụ ihe. Ballerinas na ndị na-anya gwongworo adịghị anọkọ ọnụ, ndị sayensị roket na ndị na-ede akwụkwọ akụkọ. N'agbanyeghị nke ahụ, ha na ibe ha dị ọtụtụ karịa nkịta ma ọ bụ nwamba. Ka o sina dị, ndị mmadụ na-azụlitekarị ezigbo ịhụnanya nke anụ ụlọ ha karịa ka ha na-eme ma mmadụ ole na ole mmadụ ibe ha. Gịnị kpatara nke ahụ?
Ajuju a bilitere n’izu gara aga mgbe m tụfuru nwamba kacha mma m nwetụrụla ma nwee mmetụta mgbu nke ịhapụ ya dị ka m ga-amasị enyi mmadụ. Ma nke ahụ bụ ihe adịghị mma. Ọ bụ ezie na anyị abụọ nwere ntutu na ihu anyị ma ọ na-atọ anyị ụtọ ihi ụra n’elu ihe ndina, anyị enweghị nnukwu ihe jikọrọ. Anyị abụghị otu ụdị anụmanụ. Olee otú ọbụbụenyi dị otú ahụ ga-esi gbasaa mgbe niile? A sị ka e kwuwe, na mmekọrịta anyị na mmadụ, anyị na ndị anyị na ha na-emekọ ihe ọnụ na-emekọrịta ihe - ndị mmadụ maara ihe dịka anyị nwere, ndị na-enwe ụdị ntụrụndụ anyị na-amasị, ndị mmadụ na-enwe otu egwuregwu anyị na-eme - ndị mmadụ dị ka anyị niile n'ihi na anyị yiri ha. Enwere otutu okwu otuto n’onwe anyi n’ime ndi enyi anyi.
Mana lelee mmekọrịta mụ na nwamba anya: Otu nwamba nwere IQ ihe dịka 3 ma nke m dịkarịa ala ihe 10 dị elu. A cat na-eri raw nnụnụ na oke na m ajụ. A cat bụ squat obere ntutu nwere obere ntutu na-agagharị n'èzí n'ụdị ihu igwe ọ bụla na aka ya na ụkwụ ya. Ọ na-a ofụ n’ụlọ mposi. Na ọ na udiri na bushes. N'agbanyeghị ihe ị nụrụ, emebeghị m nke ahụ.
N’ihi ya, n’ile anya mbụ gị, pusi abụghị ụdị mmadụ ị ga-atụ anya ịbụ enyi, ma ya fọdụzie inwe nkekọ ịhụnanya nke naanị ihe mgbu ga-emebi. Ka o sina dị, ọ bụrụ na ị hụ nwoke na pusi ya - cat na nwoke ya - ka ha na-agagharị na mbara ezi ọnụ, ị ga-ahụ nke ọma njikọ dị n'etiti ha na asụsụ ahụ ha. Ga - ahụ n’otu ụzọ nwamba ahụ si agbaga n’ebe nwoke ahụ nọ mgbe ọ lọtara - na etu obi si atọ nwoke ahụ ụtọ ịnụ oke ya - na mmadụ abụọ a dịgasị iche iche bụ ndị enyi, n’echiche zuru oke nke okwu ahụ, ọ bụghị naanị ụfọdụ nna ukwu-Pita ndokwa.
“Na mgbe pusi nwuru na otu n’ime ụdị ndị enyi a, iru uju a na-adị nkọ ma sie ike - nke mere na, mgbe pal ochie m nwụrụ na mberede, enwere m ijuanya na mmeghachi omume nke m. Kedu otu ihe dị iche iche ga-esi buru oke nkụja na mmetụta m mgbe ọ gara?
Enwere ike ichebara echiche pụrụ iche mgbe ị na-enyere onye ahịa aka ịme mkpebi banyere anụ ụlọ euthanasia .
Nyochaa ọnọdụ ụmụ anụmanụ dị ugbu a nke ọma. Kpebisie ike ihe ahụmịhe ndị ahịa gara aga na euthanasia na / ma ọ bụ ọnwụ. Gbalịa chọpụta mmetụta okpukpe ma ọ bụ nkà ihe ọmụma nke onye ahịa banyere euthanasia.
Anụmanụ ahụ nwere njikọ pụrụ iche ọ bụla ya na ndị ọzọ na ndụ onye ahịa ahụ? Jiri nlezianya nyochaa izi ezi nke euthanasia. Onye ahịa ya enwere ike ilekọta anụmanụ ahụ ma ọ bụrụ na anụghị anụ ahụ? Ndi ndu nke onye ahia gbanwere n’ihi onodu anumanu a? Ndi ahịa ahụ ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ ọgwụgwọ dị mkpa?
Na nyochaa ịdị adị nke euthanasia, tụlee ihe ndị a:
Ọnọdụ anụmanụ ahụ ọ dị ogologo oge, na-aga n'ihu, ma ọ bụ na-akawanye njọ?
Anụmanụ ahụ anaghịzi anabata ọgwụgwọ?
Anụmanụ ahụ na-enwe ihe mgbu ma ọ bụ nhụjuanya (enwere ike belata ihe mgbu, nhụjuanya enweghị ike; nhụjuanya nke mmụọ dị mkpa dị ka nhụjuanya anụ ahụ)?
Ọ bụrụ na anụmanụ agbakee, anụmanụ ahụ ọ̀ ga-arịa ọrịa na-agaghị ala ala ma ghara inwe obi ụtọ ná ndụ?
Ọ bụrụ na anụmanụ ahụ agbakee, ọ̀ ga-enwe mgbanwe ndị o nwere?
Ma ikekwe ajụjụ kachasị sie ike nke niile - M na - enwe nsogbu na mkpebi n’ihi na enweghị m ike ịhapụ? N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, m na-edebe anụmanụ ahụ ka ọ bụrụ nke m?
Otutu ndi mmadu nwere nsogbu kachasi ike n'echiche nke euthanasia, nke gunyere ime ihe ngwa ngwa iji mebie ndu. Usoro a, n'ezie, anabataghi ogwu ndi mmadu.
Euthanasia na-arụ ọrụ, nke enwere mkpebi siri ike ịkwụsị ndụ mebiri ahụike, pụrụ iche na ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ. Euthanasia na-egbu mmadụ, kemgbe afọ anyị bidoro, a na-akuziri anyị na igbu mmadụ ezighi ezi. E nwere ọtụtụ ihe mere ndị ahịa na-arịọ euthanasia maka anu ulo ha; ụfọdụ bụ ihe ndị kwesịrị ekwesị ebe ndị ọzọ mejupụtara ihe na-ekwesịghị ekwesị maka euthanasia. Ọ bụ ezie na onye ahịa ahụ nwere ikike ịrịọ euthanasia maka anụ ụlọ, onye ọkachamara ọgwụgwọ anụmanụ nwere ikike ịjụ ma ọ bụrụ na ụzọ ndị ọzọ ga-enye anụ ụlọ ahụ ohere ịnọgide na-ebi ezigbo ndụ nwere ike ịdị.
Mgbe onye ahịa kpebiri na euthanasia bụ nhọrọ kwesịrị ekwesị maka anụ ụlọ, onye ahịa kwesịrị ikwe ka ịhọrọ oge nke euthanasia, isonye ma ọ bụ lelee usoro ahụ, iji kwe ka ọ hụ anụ ụlọ mgbe ọ nwụsịrị onye ahịa ahụ esonyeghị na usoro ahụ, yana otu esi elekọta anụ ụlọ ahụ.
Ihe enyemaka ndị ọzọ na-enye aka mgbe ị na-emekọ ihe banyere euthanasia:
Zere okwu okwu a “ehi ụra” - ndị nne na nna na-eme ka ụmụ ha hie ụra kwa abalị.
Kọwaa usoro a tupu oge eruo.
Mee ndokwa maka ozu ahụ tupu oge eruo - gbaa mmechi ume.
Mee ndokwa maka ịkwụ ụgwọ nke ụgwọ tupu oge eruo (ma ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ma emechaa).
Debe oge na njedebe nke ụbọchị ọrụ maka euthanasia ka ndị ahịa ghara igbochi ma ọ bụ mee ọsọ ọsọ. Hazie maka ụzọ dị iche iche na ụzọ ọpụpụ maka ndị ahịa a.
Nye oge na anụmanụ naanị tupu euthanasia. Jide n'aka na inwe Kleenex dị.
Nye ezinụlọ ohere ka ha nọrọ.
Mee euthanasia na onye ọzọ nọ ugbu a ọ bụghị nanị na ị ga-enye nkwado maka ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ kamakwa maka onye ahịa gị; nwee akwa nhicha (kọwaa ọdịda / urination nke nwere ike ịpụta, kọwaa agonal gasp, tụlee iji ọgwụ na-akụnwụ ahụ na catheter).
Nye oge na anụmanụ naanị mgbe euthanasia.
Jiri nkwanye ugwu dozie ahụ gị.
Jiri ihe ọ bụla onye ahịa na-eweta ma ọ bụ jiri akpati ozu ma ọ bụ igbe - ejirila akpa ahịhịa.
Nyere ndị ahịa aka ụgbọ ala ha - kwe ka iru uju ha - na-akwado. Jide n'aka na ha nwere ike ịkwọ ụgbọala n'enweghị nsogbu.
Ziga kaadị / okooko osisi ma ọ bụ kpọọ n'echi ya.
Soro onye ahịa na-anaghị alọghachi - maka ebumnuche ndị a: enweghị anụ ụlọ, iwe iwe maka ihe, gịnị?
Atụla egwu ịme 'n'ụlọ' euthanasia.
Zọ iji nyere ndị ahịa aka
Zọ abụọ kachasị dị irè iji nyere ndị ahịa gị aka bụ ime ka mmetụta ha pụta ìhè ma gbaa ha ume ikwu maka ọnwụ ahụ.
Fewzọ ndị ọzọ iji nyere aka:
Elegharala mfu ahụ anya.
Ekwula ụgha, karịsịa nye nwatakịrị.
Akwadola ma ọ bụ mebie nnweta nke anụ ụlọ ọzọ.
Ejila echi mewe echiche n’ememe - ndi mmadu choro mmechi na ohere ikwu ezigbo.
Gaa gafee ihe omume dị iche iche ma gaa ebe ndị metụtara anụmanụ ahụ iji nyere aka ịnakwere eziokwu nke ọnwụ ahụ, na-ele foto, na-echeta oge ọma na nke ọjọọ, na-achọpụta ọdịdị nke anụ ọhịa ahụ furu efu na anụmanụ ndị ọzọ ma na-ekwu maka otu anụ ụlọ ahụ si mee ka mmadụ nwekwuo ike ndụ bụ ụzọ dị mma iji nyere aka ịnakwere ọnwụ.
Mara ma gwa ndị ahịa gị na iru uju anụ ụlọ bụ ihe dị mma na nke nkịtị na enweghị ihe ha ga-eme ihere. Ndị ahịa aghaghị inye onwe ha ikike iru újú na ịnakwere na iru újú na-ewe oge.
Ibu Ọrụ Ọrịa Veterinarian
Okwu mkpirikpi banyere ndi dibia ogwu. Ndị dọkịta na-ahụ maka anụmanụ ga-edozi echiche ha banyere ọnwụ anụmanụ.
Oge a nwere ike ịbụ oge nke ndị na-agwọ anụmanụ ga-enwerịrị mmetụta nke ọnwụ ha; ndị ọzọ aghaghị iche mmetụta nke ọdịda; ndị ọzọ ga-enwerịrị ọchịchọ ọ bụla iji zoo mmetụta ha site n'ịghọ ezigbo ọkachamara na oyi na-atụ maka ịnwụ anụmanụ ma ọ bụ itinye aka na nke ọ bụla ha nwere ike ịda mbà.
A ghaghị ịchọta ebe dị mma.
Mop Dog Ihe You Kwesịrị Knowmara Banyere Komondor
Glen nke Imaal Terrier ọ bụ enyi na enyi ma ọ bụ nkịta na-eme ihe ike?
Asụsụ ahụ nkịta nwere foto
kedu ka m si mara ụdị nkịta m nwere
shih tzu yorkie mix zuru oke
nkịta oroma na nwa ojii